UXiaomi uceba ukuvula iivenkile ezingama-5.000 eIndiya ngonyaka | I-Androidsis
IXiaomi ngoku yenye yezona zinto zibalulekileyo eIndiya. Kudala bafumana ukugqitha kwisamsung kwintengiso kwaye sele ndinguye Eyona nto ithengiswa kakhulu elizweni. Intengiso ebaluleke kakhulu, kuba yeyona inkulu emva kwe China emhlabeni. Ke siyabona ukuba iimveliso zenza iinzame ezininzi zokuphucula ubukho bazo kuyo.
Kwakhona, ayizizo ii-smartphones zorhwebo kuphela ezithengisa kakuhle eIndiya. Kwakhona nezinye iimveliso NjengeMi Band 3 yakho Banentengiso entle elizweni. Ke ngoko, iyasimangalisa into yokuba isicwangciso esitsha sikaXiaomi sibandakanya ukugxila kwimizamo emininzi kweli lizwe. Imizamo embalwa ngohlobo lweevenkile.
Kuba i-brand inezicwangciso zokuvula iivenkile ezininzi e-India. Ngapha koko, i-CEO yeXiaomi India ithe izicwangciso zenkampani ziyaqhubeka vula iivenkile ezingama-5.000 eIndiya kunyaka nje omnye. Isixa esikhulu, ekubonakala ngathi kunzima ukusiphumeza ekuqaleni. Kodwa loo nto yenza ukuba injongo yophawu icace.
Oku kuvuleka akuyonto ingaqhelekanga. Kuba idatha yokuthengisa yenkampani eIndiya iyenza icace into yokuba uninzi lwentengiso luvela ezivenkileni esele zivulekile. Njengoko kuye kwafundwa, Iipesenti ezingama-65 zentengiso yenkampani eIndiya zafunyanwa ezivenkileni. Ke ziyindlela ebaluleke kakhulu.
Akumangalisi ke ngoko ukuba uXiaomi enezicwangciso ezininzi zokuvula iivenkile eIndiya. Umbono wakhe kukwanda kwizixeko ezitsha elizweni, ukuze babe nokubakho kwilizwe liphela. Ke ngoko, amakhulu ezixeko ezitsha aya kuba nevenkile yamaTshayina ngonyaka omnye.
Akuthandabuzeki Iprojekthi yebhongo yohlobo. Kodwa kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba iXiaomi ngoyena mthengisi ubalaseleyo eIndiya, ngenxa yamaxabiso asezantsi ubukhulu becala. Ke kubalulekile ukuba bagcine ubukho babo kwimarike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uza kuvula iivenkile ezingama-5.000 XNUMX eIndiya ngonyaka